ကိုယ်တိုင်အမှားပြင်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းများ - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on August 5, 2013 at 14:21 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ကျောင်းသားအများစုဟာသူတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာအသုံးအနှုန်း၊ သဒ္ဒါအမှားတွေကို ဆရာတွေကပြင်ပေးလိမ့် မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက် ထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာလည်းသဘာဝကျတဲ့မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတွေကပြင်ပေးကြတာပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျောင်းသားတစ်ဦးဟာ သူလုပ်ဖူးတဲ့အမှားတစ်ခုကို တစ်ကြိမ်ထက်မက မှားနေတတ်ရင်တော့ ဒါကိုသတိထားဖို့လိုလာပါပြီ။ ဒီအချိန်မှာဆရာလုပ်နိုင်တာက မကြာခဏမှားနေတဲ့ သူ့အမှားကိုထောက်ပြပြီး ကျောင်းသားကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်နိုင်မယ့် self-correction skill ကိုနည်းလမ်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းသားတွေဟာ အမှားပြင်တာ ဆရာတွေသာလုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်။ သူတို့မတတ်နိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခု ဟုထင်မှတ်မှားနေကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အင်္ဂလိပ်စကားကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောနိုင်ရေးနိုင်ဖို့ ဆိုရင် မိမိကိုယ်တိုင်အမှားကိုပြင်ဆင်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပြင်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်။
Error လား Mistakes လား
Error ဆိုသည်မှာ မှားလို့မှားမှန်းမသိဘဲ မသိနားမလည်မှုနှင့်ပြုလုပ်သောအမှားမျိုးဖြစ်သည်။ Mistakes ကိုတော့ မတော်တဆအမှား၊ ပေါ့လျော့မှုအမှားဟုဆိုနိုင်သည်။ မိမိလေ့လာထားပြီး သိထားပြီးဖြစ်ပါ လျက်ကျူးလွန်မိသောအမှားမျိုးကို mistakes ဟုဆိုနိုင်သည်။
“An error is an instance of language that is unintentionally deviant and not self-corrigible by its author. A mistake is either intentionally or unintentionally deviant and self-corrigible. Slips or lapses of the tongue, pen, or keyboard are easily detected and can be self-corrected by their author unaided.” James, C. 1998. Errors in Language Learning and Use: Exploring Error Analysis.
တနည်းအားဖြင့် blunders မမှားသင့်သော အမှားဖြစ်သည်။ error အမှားမျိုးကို ခွင့်လွှတ်နိုင်ဖွယ်ရှိသလို ကျောင်းသားများ မိမိကိုယ်တိုင်ပြင်ဖို့မလွယ်သည့်အတွက် ဆရာကိုအားကိုးသည်မှာဖြစ်သင့်ပါသည်။ သို့သော်လည်း mistakes များအတွက်သူတပါးကိုချည်းအားကိုးနေလျှင် တစ်သက်လုံး dependent learner အဖြစ်လူဖြစ်ရှုံးပေတော့ မည်။ ဒါကြောင့် mistakes များကိုဖြင့် မိမိကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်နိုင်စေရန် အောက်ပါ နည်းလမ်းများကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြစေလိုပါသည်။
ဆရာကြီးဦးအောင်သင်း၏စာအုပ်များထဲတွင်မကြာခဏဖတ်ရသည့် အလွန်တန်ဖိုးရှိသည့်အဆုံးအမ တစ်ခုရှိပါသည်။ “လူလိမ္မာတို့မည်သည်ကား သူတစ်ပါး၏အမှားမှသင်ခန်းစာရ၏။ လူမိုက်တို့မည်သည်ကား ကိုယ်တိုင်မှားမှသင်ခန်းစာရ၏။ ပို၍မိုက်မဲသောသူတို့မှာကား ကိုယ်တိုင်မှားပါလျက် သင်ခန်းစာမရကြကုန်” ဟူ၏။ သင်သာလူလိမ္မာဖြစ်ပါက သူများအမှားများ မှလေ့လာနိုင်ပါသည်။ google တွင်သာ “correct the mistakes” ဆိုသည့် keyword ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာလိုက်ပါက လေ့ကျင့်နိုင်မည့်သင်ခန်းစာတွေတစ်ပုံတစ်ပင်ရပါလိမ့်မည်။ နောက်တစ်နည်းအသုံး ၀င်သည့်အရာကတော့ FCE နှင့် CAE မေးခွန်းများတွင်ပါသည့် မလိုအပ်သည့်စကားလုံးများကို ဖယ်ထုတ်ပစ်ရသည့် error correction task များကိုလုပ်ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်စာသင်သည့်အခါ ကျောင်းသားများ၏စာအုပ်များအချင်းချင်းလဲကာ အမှတ်ခြစ်စေသည့် အကျင့်ရှိပါသည်။ ထိုသို့ပြုရသည်မှာလည်း ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါသည်။ သူတစ်ပါး၏အမှားကို သတိပြုမိစေရန်ဖြစ်သည်။ မိမိအမှားကိုမမြင်တတ်သော်လည်း သူတစ်ပါး၏အမှားတော့မြင်တတ်သည်မှာ လူ့သဘာဝဖြစ်သည်မဟုတ်ပါလား။ မိခင်ဘာသာစကားဖြင့်ရေးသည့်စာကိုတောင်မှ သူတပါးပြင်ပေးမှ အမှားတွေ့တတ်သဖြင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်းများတွင် proof reader ဟူသည့်စာပြင်ဆရာ ထားရပေသည်။ ဤသို့လေ့လာဖက်မှပြင်ပေးလိုက်သည်ကို သဘောတူသည်လည်းရှိ၏။ လက်မခံနိုင်သည့်အခါလည်းရှိမည်။ ထိုအခါ ဘယ်အရာကမှန်သည်ကို ဆန်းစစ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ချို့ရှိပါသည်။ အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ဂူဂဲလ်လုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ the same as နှင့် the same than နှစ်ခုကို ရှာကြည့်လျှင် the same as ပါသည့်ရလာဒ်များမှာ အဆမတန် ပိုများသည်ကိုတွေ့ရှိရပါလိမ့်မည်။ ထို့ ကြောင့် the same as ကပိုမှန်သည်ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ရလာဒ်က မရှင်းလင်းပါက ၄င်း သည် native speakers မိခင်ဘာသာစကားပြောသူများ အတွက်ပင် မှားလေ့ရှိသည့်အမှားဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်ပါသည်။ ရှာသည့်အခါ quotation marks များထည့်ရန်မမေ့ပါနှင့်။
ဂူဂဲလ်တွင်မေးခွန်းအနေဖြင့်လည်းမေးနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ "Is staff countable or uncountable?" ဟုရိုက်လျှင် ဖြေထားသည့်အဖြေများစွာတွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Yahoo Answers ကဲ့သို့သော မေးခွန်းများကိုသီးသန့်ဖြေသော ဆိုက်များတွင်လည်းမေးနိုင်သည်။ ယင်းသို့ကြိုးစားပြီး အဖြေမရသည်များကိုမှ ဆရာတစ်ဦးအားမေးသင့်ပါသည်။
စိတ်မချရသည့်အမှားပြင်ဆင်ချက်မျိုးပြဿနာများသည် မူရင်း မိခင်ဘာသာစကားပြောသူများနှင့် ဆွေးနွေးခွင့်ရပါက အလွယ်တကူလွင့်ပျောက်သွားနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းကြပါသည်။ ယနေ့ အင်တာနက်ခေတ်ကြီးတွင် conversation exchange ဘာသာစကားအလဲအလှယ်ပြုသည့် အင်တာနက် စာမျက်နှာများကြောင့် native speakers များနှင့်တွေ့ဖို့အင်မတန်လွယ်ကူလှပါသည်။ မိမိက ဗမာစကားသင်ပေး။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် သူတို့က အင်္ဂလိပ်စကားပြန်သင်ပေးနှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိသည့်အလုပ်ပင်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် www.learnenglish.britishcouncil.org နှင့် www.livemocha.com ကဲ့သို့သော websit များတွင် မှတ်ပုံတင်ထားရုံဖြင့် အဆိုပါမေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းများကို လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
စာမေးပွဲဖြေမည့်ကျောင်းသားများကို လေ့ကျင့်ပေးသည့် approach တစ်ခုမှာ test teach test approach ပင်ဖြစ်သည်။ language point တစ်ခုကိုစစ်ကြည့်သည်။ ပြီးနောက် လိုအပ်ချက်များကို သင်ပေးသည်။ ထို့နောက် ထပ်စစ်ကြည့်သည်။ ဤသို့သံသရာလည်သွားရင်း ကြေနပ်မှုရှိချိန်တွင် စာမေးပွဲဖြေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အတူ မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဤသို့လေ့လာနိုင်ပါသည်။
English in Use နှင့် Oxford practice grammar ကဲ့သို့သော ကိုယ်တိုင်လေ့လာသည့် စာအုပ်များ အသုံးပြုပါက သဒ္ဒါရှင်းလင်းချက်များကိုအရင်မဖတ်ဘဲ လေ့ကျင့်ခန်းများကိုအရင်လုပ်ကြည့်ပါ။ ပြီးမှ ရှင်းလင်းချက်ကိုဖတ်ကြည့်ပြီး ဖြေထားသည်များကိုပြန်စစ်ကြည့်ပါ။ ပြင်ချင်သည်ကိုပြင်ပါ။ ထို့နောက်တွင် မှစာအုပ်နောက်ကျောရှိ အဖြေများနှင့်တိုက်စစ်ကြည့်ပါ။ သို့ရာတွင် မှားသည်ကိုစိတ်ထဲတွင်သာမှတ်သား ပါ။ စာအုပ်ထဲတွင်ပြင်မရေးပါနှင့်။ တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ထားပြီး မိမိရေးထားသည်များကိုပြန်ကြည့်ပါ။ ဘယ်သည်ကမှန်၍ဘယ်သည်ကဘာကြောင့် မှားသည်ကို မှတ်မိအောင်ကျိုးစားကြည့်ပါ။
လုပ်နိုင်သည့်နောက်တစ်နည်းကတော့ မိမိမှားတတ်သည်များကို မှတ်စုစာအုပ်တစ်အုပ်တွင် သီးခြား ချရေးထားကြည့်ပါ။ တစ်နေ့တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်တော့ ပြန်ကြည့်ပြီး နောက်တစ်ခါထပ်မမှားတော့ဟု ယုံကြည်သည့်စာကြောင်းကို အမှတ်အသားလုပ်ထားပါ။ ကာလအတန်ကြာလျှင် မိမိလုပ်တတ်သည့်သဒ္ဒါ အမှား၊ စာလုံးပေါင်းအမှား၊ အသံထွက်အမှားများစာရင်းတစ်ခုရလာပါလိမ့်မည်။ ၄င်းစာရင်းအားမိမိ စာရေးသားမှုတစ်ခုပြီးလျှင်တိုက်ဆိုင်ကာ အမှားထပ်လုပ်သေးသလား၊ အမှားကင်းသွားပြီလား ဟုစစ်နိုင် ပါသည်။
Microsoft Word သို့မဟုတ် Open Office writer စသည့် word processor များသုံးလျှင် spell check နှင့် grammar check များကို off လုပ်ထားပါ။ မိမိရေးသားလိုသည်များရေးပြီးမှ ၄င်း features များပြန်ဖွင့်ကာ သူတို့ မည်သည့်အရာများကို ပြင်ပေးကြောင်းပြန်စစ်ကြည့်ပါ။ အရေးကြီးသည့်အချက်များ ကို မိမိ အမှားမှတ်စုအတွင်းမှတ်သားပါ။
မိခင်ဘာသာစကားပြောသူများပင် သူတို့ရေးထားသည်ကိုပြင်ဖို့ ခက်တတ်ပါသည်။ အကြောင်းက လူတို့ဦးနှောက်သည် မိမိတို့ချရေးမည်ဟုကြံစည်ထားသည်များကိုသာမြင်တတ်ပြီး အမှန်တကယ် ချရေးဖြစ်သည်ကိုတော့မမြင်တတ်ချေ။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ မိမိရေးထားသည်ကို တစ်ရက်တန်သည် နှစ်ရက်တန်သည်ပစ်ထားပြီး ပြန်ဖတ်ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် မိမိအမှားများ မည်မျှလုပ်မိသည်ကို အံ့အားသင့်စဖွယ်ပြန်တွေ့ရသည်မှာ ကျွန်တော့် ကိုယ်တွေ့ပင် ဖြစ်သည်။ စကားပြောများကိုတော့ အသံသွင်းထားကာ နောက်တစ်ရက်နှစ်ရက်နေ လျှင်ပြန် နားထောင်ကြည့်ပါ။ IELTS စာမေးပွဲ speaking part two ကဲ့သို့ လေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုပါလိမ့် မည်။
အကယ်၍စာဖတ်သူသာ အထက်ဖော်ပြခဲ့သော နည်းလမ်းများထဲမှတစ်ချို့ကို လိုက်နာကာ လက်တွေ့ လုပ်ကြည့်မည်ဆိုပါက မိမိရေးစဉ်ပြောစဉ်က သတိမထားမိခဲ့သော အမှား mistakes များအား သတိ မူပြုပြင်နိုင်မည်မှာ ကျိန်းသေမလွဲဖြစ်ကြောင်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
ကြောငျးသားအမြားစုဟာသူတို့ရဲ့အင်ျဂလိပျစာအသုံးအနှုနျး၊ သဒ်ဒါအမှားတှကေို ဆရာတှကေပွငျပေးလိမျ့ မယျဆိုတဲ့မြှျောလငျ့ခကျြ ထားတတျကွပါတယျ။ ဒါဟာလညျးသဘာဝကတြဲ့မြှျောလငျ့ခကျြဖွဈပါတယျ။ ဆရာတှကေပွငျပေးကွတာပေါ့။ ဒါပမေယျ့လညျး ကြောငျးသားတဈဦးဟာ သူလုပျဖူးတဲ့အမှားတဈခုကို တဈကွိမျထကျမက မှားနတေတျရငျတော့ ဒါကိုသတိထားဖို့လိုလာပါပွီ။ ဒီအခြိနျမှာဆရာလုပျနိုငျတာက မကွာခဏမှားနတေဲ့ သူ့အမှားကိုထောကျပွပွီး ကြောငျးသားကိုယျတိုငျပွငျဆငျနိုငျမယျ့ self-correction skill ကိုနညျးလမျးပေးဖို့ဖွဈပါတယျ။
ကြောငျးသားတှဟော အမှားပွငျတာ ဆရာတှသောလုပျနိုငျတဲ့ အလုပျ။ သူတို့မတတျနိုငျတဲ့အလုပျတဈခု ဟုထငျမှတျမှားနကွေပါတယျ။ တကယျတော့ အင်ျဂလိပျစကားကို ကောငျးကောငျးမှနျမှနျပွောနိုငျရေးနိုငျဖို့ ဆိုရငျ မိမိကိုယျတိုငျအမှားကိုပွငျဆငျနိုငျရမှာဖွဈပါတယျ။ အဲဒီလိုပွငျနိုငျဖို့ နညျးလမျးတှလေညျးရှိပါတယျ။
Error ဆိုသညျမှာ မှားလို့မှားမှနျးမသိဘဲ မသိနားမလညျမှုနှငျ့ပွုလုပျသောအမှားမြိုးဖွဈသညျ။ Mistakes ကိုတော့ မတျောတဆအမှား၊ ပေါ့လြော့မှုအမှားဟုဆိုနိုငျသညျ။ မိမိလလေ့ာထားပွီး သိထားပွီးဖွဈပါ လကျြကြူးလှနျမိသောအမှားမြိုးကို mistakes ဟုဆိုနိုငျသညျ။
တနညျးအားဖွငျ့ blunders မမှားသငျ့သော အမှားဖွဈသညျ။ error အမှားမြိုးကို ခှငျ့လှတျနိုငျဖှယျရှိသလို ကြောငျးသားမြား မိမိကိုယျတိုငျပွငျဖို့မလှယျသညျ့အတှကျ ဆရာကိုအားကိုးသညျမှာဖွဈသငျ့ပါသညျ။ သို့သျောလညျး mistakes မြားအတှကျသူတပါးကိုခညျြးအားကိုးနလြှေငျ တဈသကျလုံး dependent learner အဖွဈလူဖွဈရှုံးပတေော့ မညျ။ ဒါကွောငျ့ mistakes မြားကိုဖွငျ့ မိမိကိုယျတိုငျပွငျဆငျနိုငျစရေနျ အောကျပါ နညျးလမျးမြားကိုလိုကျနာကငျြ့သုံးကွစလေိုပါသညျ။
ဆရာကွီးဦးအောငျသငျး၏စာအုပျမြားထဲတှငျမကွာခဏဖတျရသညျ့ အလှနျတနျဖိုးရှိသညျ့အဆုံးအမ တဈခုရှိပါသညျ။ “လူလိမ်မာတို့မညျသညျကား သူတဈပါး၏အမှားမှသငျခနျးစာရ၏။ လူမိုကျတို့မညျသညျကား ကိုယျတိုငျမှားမှသငျခနျးစာရ၏။ ပို၍မိုကျမဲသောသူတို့မှာကား ကိုယျတိုငျမှားပါလကျြ သငျခနျးစာမရကွကုနျ” ဟူ၏။ သငျသာလူလိမ်မာဖွဈပါက သူမြားအမှားမြား မှလလေ့ာနိုငျပါသညျ။ google တှငျသာ “correct the mistakes” ဆိုသညျ့ keyword ရိုကျထညျ့ပွီး ရှာလိုကျပါက လကေ့ငျြ့နိုငျမညျ့သငျခနျးစာတှတေဈပုံတဈပငျရပါလိမျ့မညျ။ နောကျတဈနညျးအသုံး ၀ငျသညျ့အရာကတော့ FCE နှငျ့ CAE မေးခှနျးမြားတှငျပါသညျ့ မလိုအပျသညျ့စကားလုံးမြားကို ဖယျထုတျပဈရသညျ့ error correction task မြားကိုလုပျကွညျ့ခွငျးဖွဈသညျ။
ကြှနျတျောစာသငျသညျ့အခါ ကြောငျးသားမြား၏စာအုပျမြားအခငျြးခငျြးလဲကာ အမှတျခွဈစသေညျ့ အကငျြ့ရှိပါသညျ။ ထိုသို့ပွုရသညျမှာလညျး ရညျရှယျခကျြရှိပါသညျ။ သူတဈပါး၏အမှားကို သတိပွုမိစရေနျဖွဈသညျ။ မိမိအမှားကိုမမွငျတတျသျောလညျး သူတဈပါး၏အမှားတော့မွငျတတျသညျမှာ လူ့သဘာဝဖွဈသညျမဟုတျပါလား။ မိခငျဘာသာစကားဖွငျ့ရေးသညျ့စာကိုတောငျမှ သူတပါးပွငျပေးမှ အမှားတှတေ့တျသဖွငျ့ စာအုပျထုတျဝရေေးလုပျငနျးမြားတှငျ proof reader ဟူသညျ့စာပွငျဆရာ ထားရပသေညျ။ ဤသို့လလေ့ာဖကျမှပွငျပေးလိုကျသညျကို သဘောတူသညျလညျးရှိ၏။ လကျမခံနိုငျသညျ့အခါလညျးရှိမညျ။ ထိုအခါ ဘယျအရာကမှနျသညျကို ဆနျးစဈနိုငျသညျ့ နညျးလမျးတဈခြို့ရှိပါသညျ။ အလှယျဆုံးနညျးလမျးကတော့ ဂူဂဲလျလုပျခွငျးပငျဖွဈသညျ။ ဥပမာ the same as နှငျ့ the same than နှဈခုကို ရှာကွညျ့လြှငျ the same as ပါသညျ့ရလာဒျမြားမှာ အဆမတနျ ပိုမြားသညျကိုတှရှေိ့ရပါလိမျ့မညျ။ ထို့ ကွောငျ့ the same as ကပိုမှနျသညျဟု ယူဆနိုငျပါသညျ။ အကယျ၍ ရလာဒျက မရှငျးလငျးပါက ၄ငျး သညျ native speakers မိခငျဘာသာစကားပွောသူမြား အတှကျပငျ မှားလရှေိ့သညျ့အမှားဖွဈကွောငျးသိနိုငျပါသညျ။ ရှာသညျ့အခါ quotation marks မြားထညျ့ရနျမမပေ့ါနှငျ့။
ဂူဂဲလျတှငျမေးခှနျးအနဖွေငျ့လညျးမေးနိုငျပါသညျ။ ဥပမာ "Is staff countable or uncountable?" ဟုရိုကျလြှငျ ဖွထေားသညျ့အဖွမြေားစှာတှနေို့ငျမညျဖွဈသညျ။
Yahoo Answers ကဲ့သို့သော မေးခှနျးမြားကိုသီးသနျ့ဖွသေော ဆိုကျမြားတှငျလညျးမေးနိုငျသညျ။ ယငျးသို့ကွိုးစားပွီး အဖွမေရသညျမြားကိုမှ ဆရာတဈဦးအားမေးသငျ့ပါသညျ။
စိတျမခရြသညျ့အမှားပွငျဆငျခကျြမြိုးပွဿနာမြားသညျ မူရငျး မိခငျဘာသာစကားပွောသူမြားနှငျ့ ဆှေးနှေးခှငျ့ရပါက အလှယျတကူလှငျ့ပြောကျသှားနိုငျသညျ။ ကြှနျတျောတို့ကံကောငျးကွပါသညျ။ ယနေ့ အငျတာနကျခတျေကွီးတှငျ conversation exchange ဘာသာစကားအလဲအလှယျပွုသညျ့ အငျတာနကျ စာမကျြနှာမြားကွောငျ့ native speakers မြားနှငျ့တှဖေို့အငျမတနျလှယျကူလှပါသညျ။ မိမိက ဗမာစကားသငျပေး။ အပွနျအလှနျအားဖွငျ့ သူတို့က အင်ျဂလိပျစကားပွနျသငျပေးနှဈဦးနှဈဖကျ အကြိုးရှိသညျ့အလုပျပငျဖွဈသညျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ www.learnenglish.britishcouncil.org နှငျ့ www.livemocha.com ကဲ့သို့သော websit မြားတှငျ မှတျပုံတငျထားရုံဖွငျ့ အဆိုပါမေးမွနျးဆှေးနှေးခွငျးမြားကို လုပျနိုငျမညျဖွဈသညျ။
စာမေးပှဲဖွမေညျ့ကြောငျးသားမြားကို လကေ့ငျြ့ပေးသညျ့ approach တဈခုမှာ test teach test approach ပငျဖွဈသညျ။ language point တဈခုကိုစဈကွညျ့သညျ။ ပွီးနောကျ လိုအပျခကျြမြားကို သငျပေးသညျ။ ထို့နောကျ ထပျစဈကွညျ့သညျ။ ဤသို့သံသရာလညျသှားရငျး ကွနေပျမှုရှိခြိနျတှငျ စာမေးပှဲဖွခွေငျးဖွဈသညျ။ ထို့အတူ မိမိကိုယျတိုငျလညျးဤသို့လလေ့ာနိုငျပါသညျ။
English in Use နှငျ့ Oxford practice grammar ကဲ့သို့သော ကျိုယျတိုငျလလေ့ာသညျ့ စာအုပျမြား အသုံးပွုပါက သဒ်ဒါရှငျးလငျးခကျြမြားကိုအရငျမဖတျဘဲ လကေ့ငျြ့ခနျးမြားကိုအရငျလုပျကွညျ့ပါ။ ပွီးမှ ရှငျးလငျးခကျြကိုဖတျကွညျ့ပွီး ဖွထေားသညျမြားကိုပွနျစဈကွညျ့ပါ။ ပွငျခငျြသညျကိုပွငျပါ။ ထို့နောကျတှငျ မှစာအုပျနောကျကြောရှိ အဖွမြေားနှငျ့တိုကျစဈကွညျ့ပါ။ သို့ရာတှငျ မှားသညျကိုစိတျထဲတှငျသာမှတျသား ပါ။ စာအုပျထဲတှငျပွငျမရေးပါနှငျ့။ တဈပတျနှဈပတျလောကျထားပွီး မိမိရေးထားသညျမြားကိုပွနျကွညျ့ပါ။ ဘယျသညျကမှနျ၍ဘယျသညျကဘာကွောငျ့ မှားသညျကို မှတျမိအောငျကြိုးစားကွညျ့ပါ။
လုပျနိုငျသညျ့နောကျတဈနညျးကတော့ မိမိမှားတတျသညျမြားကို မှတျစုစာအုပျတဈအုပျတှငျ သီးခွား ခရြေးထားကွညျ့ပါ။ တဈနတေ့ဈကွိမျ၊ နှဈကွိမျတော့ ပွနျကွညျ့ပွီး နောကျတဈခါထပျမမှားတော့ဟု ယုံကွညျသညျ့စာကွောငျးကို အမှတျအသားလုပျထားပါ။ ကာလအတနျကွာလြှငျ မိမိလုပျတတျသညျ့သဒ်ဒါ အမှား၊ စာလုံးပေါငျးအမှား၊ အသံထှကျအမှားမြားစာရငျးတဈခုရလာပါလိမျ့မညျ။ ၄ငျးစာရငျးအားမိမိ စာရေးသားမှုတဈခုပွီးလြှငျတိုကျဆိုငျကာ အမှားထပျလုပျသေးသလား၊ အမှားကငျးသှားပွီလား ဟုစဈနိုငျ ပါသညျ။
Microsoft Word သို့မဟုတျ Open Office writer စသညျ့ word processor မြားသုံးလြှငျ spell check နှငျ့ grammar check မြားကို off လုပျထားပါ။ မိမိရေးသားလိုသညျမြားရေးပွီးမှ ၄ငျး features မြားပွနျဖှငျ့ကာ သူတို့ မညျသညျ့အရာမြားကို ပွငျပေးကွောငျးပွနျစဈကွညျ့ပါ။ အရေးကွီးသညျ့အခကျြမြား ကို မိမိ အမှားမှတျစုအတှငျးမှတျသားပါ။
မိခငျဘာသာစကားပွောသူမြားပငျ သူတို့ရေးထားသညျကိုပွငျဖို့ ခကျတတျပါသညျ။ အကွောငျးက လူတို့ဦးနှောကျသညျ မိမိတို့ခရြေးမညျဟုကွံစညျထားသညျမြားကိုသာမွငျတတျပွီး အမှနျတကယျ ခရြေးဖွဈသညျကိုတော့မမွငျတတျခြေ။ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးကတော့ မိမိရေးထားသညျကို တဈရကျတနျသညျ နှဈရကျတနျသညျပဈထားပွီး ပွနျဖတျကွညျ့ခွငျးဖွဈသညျ။ ဤနညျးဖွငျ့ မိမိအမှားမြား မညျမြှလုပျမိသညျကို အံ့အားသငျ့စဖှယျပွနျတှရေ့သညျမှာ ကြှနျတေျာ့ ကိုယျတှပေ့ငျ ဖွဈသညျ။ စကားပွောမြားကိုတော့ အသံသှငျးထားကာ နောကျတဈရကျနှဈရကျနေ လြှငျပွနျ နားထောငျကွညျ့ပါ။ IELTS စာမေးပှဲ speaking part two ကဲ့သို့ လကေ့ငျြ့ခနျးမြားအတှကျမြားစှာအထောကျအကူပွုပါလိမျ့ မညျ။
အကယျ၍စာဖတျသူသာ အထကျဖျောပွခဲ့သော နညျးလမျးမြားထဲမှတဈခြို့ကို လိုကျနာကာ လကျတှေ့ လုပျကွညျ့မညျဆိုပါက မိမိရေးစဉျပွောစဉျက သတိမထားမိခဲ့သော အမှား mistakes မြားအား သတိ မူပွုပွငျနိုငျမညျမှာ ကြိနျးသမေလှဲဖွဈကွောငျး တိုကျတှနျးလိုကျပါသညျ။
Permalink Reply by Ye Naing on August 10, 2013 at 18:45
Thank Ko Zar Ni
Permalink Reply by aungnaingthu on November 9, 2014 at 18:22